Sintomy Blackburn Beverley FSX & P3D
Ny Beverley dia nanana fahaiza-manao miavaka amin'ny famonosana sy fandatsana entana mavesatra hatramin'ny 22 taonina ary, ampian'ny fanodikodinam-paingotra mahery vaika sy fiarandalamby miorina mafy, dia afaka nipetraka sy nidina tamin'ny lalan-kely na vitrika.
Niasa tamina iraka miaramila sy asa isan-karazany isan-karazany, nandritra ny folo taona niasana am-perinasa, io no asa-tanana nataon'i RAF izay tsy misy dikany. Hatramin'izao, ny famokarana voalohany Beverley sisa tavela amin'ny maha tranombakoka azy.
Ny maodely dia miaraka amin'ny VS mahazaka ILS sy GCA, jiro jirofo miovaova, ary fanodikodinam-paompy. Misy firaketana roa, XB261 misolo tena ny reincarnation ny fiaramanidina mpamokatra fahatelo, ary XM109 asio loko amin'ny volavolan-tsarimihetsika camouflage 'Afovoany Atsinanana' amin'ny andiany farany.
Modely sy firafitr'i Manfred Jahn, dinamika fanidinan'i Wayne Tudor, ary Ted Wolfgang.
Zava-dehibe ny famakiana ny antontan-taratasy momba an'io add-on hahafantatra ny fampiasana azy sy hahitana ireo fiasa rehetra ananany.